MIUI ROM | Androidsis
ROM ROM MIUI
Manomboka amin'ny ifotony isika. Ho anao izay tsy mahalala ny atao hoe ROM masaka dia andao lazaina a ROM no rafitra fiasan'ny terminal malalantsika. Ny Factory ROM dia ilay Android namboarin'i Google ho an'ny Nexus, ilay iray izay manome HTC ny fantsony na Samsung. Mety ho ROM am-piandohana ity, na inona na inona tianao hiantsoana azy. ROM masaka no novolavolain'ny mpampiasa ho an'ny fiarahamonina, toy ny maro amin'ny XDA, ny zazalahin'i CyanogenMod na ireo HTCMania. Androany manokana dia miresaka momba ny MIUI isika (misy dikanteny efa voamarika). Efa fantatrao ny fomba fiasan'ny olan'ny fametrahana ROM, ary raha tsy fantatrao, HTCMania o XDA izany dia feno tutorials ho an'ny terminal manokana anao.
Ity ROM ity dia novolavolain'ny vondrom-piarahamonina sinoa, ary mahazoa haingana dia haingana, manokana, isan-kerinandro misy kinova vaovao mivoaka. Mbola mampiasa Froyo, na dia miaraka amin'ny Fanavaozana ny OTA ho an'ny Nexus One, antenaina fa hifindra izy ireo atsy ho atsy Gingerbread. Betsaka ny mpamorona mandika izany amin'ny teny Espaniôla, na dia misy foana aza ny zavatra atolotry ny mpampiasa azy, hamahana izany ary handika ny ROM 100%. Tsy zavatra matotra be izy ireo matetika, na dia tadidiko indray mandeha aza, nampiditra fifandraisana, hitako tamin'ny teny sinoa ny menio, ary tsy maintsy nosoratako tamin'ny isa Gmail.
Manana kinova azo antoka ho an'ireo terminal ireo:
Raha ny tontolon'ny sary dia manana Launcher izy ireo, misy dock ambany ary misy birao 6 amin'ny alàlan'ny default. Configurable mazava ho azy. Malaza dia azy Widgetan'ny toetr'andro miaraka amin'ny famantaranandro, izay misy eny amin'ny tsena. Ny interface dia mampatsiahy ny IO. Betsaka no tia an'io, ny sasany kosa tsy tia azy mihitsy (mpizara eo aminy) .Ny ROM dia miakatra amin'ny kinova 1.2.25 (ny faha-25 no andro fandefasana, ny faha-2 dia ny volana febuari). Tao amin'ny kinova farany nohamarinin'izy ireo:
Olana mahazo sms
Olana amin'ny fikandrana Pop-ups
Olana amin'ny horonan-tsary sy feo eo amin'ny efijery hidin-trano
Olana mampiseho ireo fifandraisana vao zahana
Olana amin'ny fifandraisana SIM
Olana sasany amin'ny Bluetooth
FC amin'ny lisitra mainty
Olana amin'ny lohahevitra, ny famantaranandro ary ny sary an-tsary
Fanatsarana ny gallery
Olana vitsivitsy amin'ny bara misy sy ny efijery fanidiana
Nanampy fiasa vaovao ho an'ny mpilalao mozika
Ary ireo dia tsy avy amin'ny kinova 1.2.19 (nanomboka tamin'ny 19 febroary). Mahazo hevitra momba ny hafainganan'ny fandrosoana amin'ity ROM ity ianao. Notsapaiko tamin'ny kinova 1.1.28 ho an'ny Desire. Ny fihinanana bateria dia avo kokoa noho ny CyanogenMod. Ny hafainganam-pandehan'ny ROM dia tena tsara. Tena azo namboarina nefa tsy misintona na inona na inona, miaraka amin'ny lohahevitra, kisary ary mari-drano maro. Saingy tsy resy lahatra aho. Ny hafainganam-pandehan'ny CM7 dia tena sarotra tanterahina. Tiako ny interface madio kokoa, tsy misy sarimiaina na sary miraikitra be. Miankina amin'ny tranonkala hanova, lohahevitra, kisary ary izay rehetra azonao eritreretina. Mazava ho azy, ny zava-drehetra dia azo ampifanarahina amin'ny Android. Saingy tsy hitako izay hananana ny MIUI miaraka amin'ny ADW raha toa ka manana ny CM7 aho. Izany indrindra no eritreretiko ho akanjo matanjaka MIUI ho an'ny mpanaraka azy, ny interface. Misy ROM tsy tambo isaina miorina amin'izany, toy ny ity iray ho an'ny Nexus One izay atambanan'ny mpampiasa HTCMania.
Sahy ve ianao manandrana azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » ROM ROM MIUI
Fermuch dia hoy izy:
Heveriko fa amin'izao fotoana izao CyanogenMod (7) dia milamina kokoa noho ny MIUI. Na dia toa mahaliana aza. Marihina ihany koa fa mitondra Gingerbread ny CM7, ary efa ankafiziko amin'ny findaiko io.
Valiny tamin'i Fermuch
Voadika ihany koa izy ireo ary tena haingana be, ho an'ny HD2 miaraka amin'ny Android, mahafinaritra izany, niaraka tamin'izy ireo aho hatramin'ny fiandohan'ny volana Desambra ary Acura, iray amin'ireo chef Espaniola tsara indrindra, manavao azy ireo matetika ao amin'ny htcspain. Entiko izao ny 21.1.1, satria ilay farany navoakan'i Acura dia tsy boribory tanteraka, ary ity iray ity dia manafintohina, 100%.
Moche dia hoy izy:
Salama, tsy haiko raha fantatrao fa ny gingerbread ofisialy (nexus iray) ROM dia eto hatramin'ny 24 febroary hisintona sy hametraka amin'ny alalàn'ny fanarenana. Ofisialy rehetra ary efa ela talohan'ny OTA ... indrindra ho antsika izay manana vodafone.
Mamaly an'i Moche
rikimm dia hoy izy:
Mila mametraka maodely maro hafa koa ianao ho an'ny xperia x10 miditra telefaona hafa maro hafa aho
Mamaly an'i rikimm
Ahoana ny fanitarana ny androm-batterie